Alex Oxlade Chamberlain Child Story Plus akwụkwọ akụkọ
Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Alex Oxlade Chamberlain Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Alex Oxlade Chamberlain Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Life Akụkọ nke a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Ox'. Anyị Alex Oxlade Chamberlain Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Ex-Gunner na ndị ọkachamara na-asụ Bekee na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere ihe ọmụma banyere ya.
Rob Holding Childhood Plus Story
Ee, onye ọ bụla maara banyere egwuregwu ya na-eme ikike mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ akụkọ ndụ Alex Oxlade Chamberlain nke gụnyere ịmatakwu banyere nne na nna ya, nwanne ya, na ibi ndụ ya wdg.
Ndụ ndị na-agba ọsọ na mpụga pitch bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite.
Alex Oxlade Chamberlain Childhood Akụkọ - Ndụ mbido:
Alexander Mark David "Alex" A mụrụ Oxlade-Chamberlain na 15th nke August, 1993 na Portsmouth, United Kingdom site n'aka Mark Chamberlain (nna) na Wendy Oxlade (nne).
Ashley Barnes Akụkọ nwata na gbakwunyere Ezigbo akụkọ banyere Biography
Cheta na: Oxlade bụ aha nna ya ma Chamberlain bụ nke nna ya. A mụrụ Alex agbụrụ. Mama ya na-acha ọcha mgbe papa ya bụ nwa.
Ezinụlọ nna ya bụ onye Jamaica. Ọ bụ nne na nna ochie Alex bụ ndị si Jamaica kwaga England iji chọọ ndụ ka mma.
Alex na-etinye oge ọ bụ nwata na-ekere òkè n'egwuregwu dị iche iche. Thou malitere ịkụ bọl mgbe ọ dị afọ 2. E weere ya dị ka onye nwere ọgụgụ isi site n'aka ndị nkuzi ya n'ụlọ akwụkwọ.
Nwatakịrị nke kachasị egwuregwu n'èzí n'egwuregwu football. O doro anya, Oxlade-Chamberlain gara St John's College, Portsmouth.
Anyanwụ kpughere na Oxlade-Chamberlain fọrọ nke nta ka ọ họrọ agbụrụ rugby n'elu football mgbe a na-enye ya ikpe na London Irish. Otú ọ dị, ọ na-egwuri egwu ịgba chaa chaa dịka ọkara ma ọ bụ zuru ezu.
Dị ka kpakpando mbụ nke Arsenal, “Schoollọ akwụkwọ sekọndrị anaghị agba bọọlụ. Ọ bụ ụlọ ịgba egwuregwu rugby na egwuregwu na ka m nọ n'ọzụzụ egwuregwu, a manyere m ịgba egwu ịgba egwu.
M na-egwuri egwu-ọkara ma ọ bụ na-azụ ma na m niile na ya. Enwetara m ikpe maka London Irish mana enweghị m ike ịme ya n'ihi na Southampton agaghị ekwe m. ”
Oxlade-Chamberlain bụkwa onye na-anụ ọkụ n'obi na-egwu egwu ya na ya na-egwuri egwu dị ka wicketkeeper, Bowler na oghere batsman na ndịda ọwụwa anyanwụ Hampshire.
Chris Smalling Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
A na-enye ya ọnwụnwa dị ka onye na-arụ ọrụ wicketkeeper-batsman Hampshire, ma jụrụ n'ihi na o megidere ịhụnanya ya maka egwuregwu ndị ọzọ.
Alex bụkwa otu n'ime egwuregwu ụlọ akwụkwọ ya kachasị amasị ya mgbe ọ bụ nwatakịrị. Ọ bụ onye kacha mma n'ụlọ akwụkwọ ya. Igba ọsọ ya bụ ihe doro anya kpatara o ji sonye n'ọtụtụ egwuregwu na mpaghara ala.
O kpebiri ịgbaso nzọụkwụ nna ya n'ikpeazụ site na ịhọrọ football dị ka egwuregwu ọ ga-eme mgbe niile.
Dị ka ụmụ amaala bọọlụ, Alex Oxlade-Chamberlain chere na enweghị sentimita ga-emebi nrọ ya nke ịbụ onye ama ama dịka nna ya.
Jude Bellingham Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Dabere na Egwuregwu Ugborochi, nna ya bụ Mark Chamberlain ga-eburu onye nke mbụ na-eto eto Arsenal, gaa n'ogige ntụrụndụ dị nso na Portsmouth Port Solent Marina maka ọzụzụ nke football.
O nwetara akara aha ahụ 'Ehi' site na ụlọ akwụkwọ elementrị ya n'ihi ejiji egwu ya nke mere ka ọ bụrụ onye mbụ na onye egwuregwu nke mmeri ahụ dị ka nwatakịrị.
Alex Oxlade Chamberlain mbụ trophy na School.
Ndụ Alex Oxlade Chamberlain:
Nna ya, Mark Chamberlain bụbu onye England na-agba ọsọ. A na-ahụta ya dịka otu onye ọkpụkpọ England kachasị ọsọ n'oge 1970 na 1980s.
Ka nwa ya bụ Alex na-ede ya,
'Ruo mgbe m dị afọ itoolu ma ọ bụ 10, echere m na m dị ngwa karịa nna m,' ka Oxlade-Chamberlain na-ekwu.
'Otu ụbọchị mgbe anyị rutere, ọ gbagburu m, amaghịkwa m ihe merenụ. M malitere ịgwa ya na ọ na-aghọ aghụghọ ule. N'ụzọ doro anya, ọ chere na afọ ahụ m nwere ike ịla n'iyi. '
Nna ya, bụ Mark Chamberlain na-agwa ya ihe dị iche. 'Ọ ruru n'ókè mgbe ọ bụ 11 ma ọ bụ karịa - enweghị m ike icheta afọ ole ọ dị - yana ọ na-agwa ụfọdụ ndị hụrụ m egwu egwu.
Ha gwara ya, “Papa gị ọsọ ọsọ”, ọ sị ya: “Ngwa! Ọ dịghị ngwa ngwa. Ana m eti ya ihe mgbe niile! ” Nke ahụ bụ mgbe m gwara ya, "Mana m hapụrụ gị" Nke a bụ mgbe anyị nwere ihe ịma aka ahụ.
Nke a agbanweghi eziokwu ahụ bụ na ha abụọ ka bụ ezigbo enyi ruo ụbọchị.
Ollie Watkins Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Alex na Mark - Dika Nna, dika Nwa.
Alex Oxlade-Chamberlain enweghị echiche ọ bụla banyere otú ndụ ya dị ugbu a si bụrụ ọrụ nna ya Mark dị ka ndị ịgba egwu egwuregwu na 1970s na 1980s. Papa ya meriri nnukwu trophi n'oge ya.
Nna Alex Oxlade Chamberlain- Mark.
Ọ bụ onye ama ama maka igwu egwu egwuregwu ya na mmeri 1984 na England na Maracana. Onye bụbu Arsenal winger nyere nna ya otuto maka inye ya mgbakwunye ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ
Gary Cahill Child Story Story na ihe omuma
Nne: Wendy Oxlade (nke dị n'okpuru ebe a) bụ nne Alex. Ọtụtụ n'ime ndị Fans ya na-ahụtụbeghị foto ya ga-ekwenye na Alex nwere nne gbara ọchịchịrị. Wendy bụ onye amụrụ Britain ma si na Portsmouth, England pụta.
Nwanyị Alex Oxlade Chamberlain - Wendy Oxlade.
Wendy Oxlade bụ nne dị umeala n'obi ma dị jụụ nke a na-ahụghị n'ihu ọha. O nwere olile anya ndị ọzọ na-akwado football maka obere kpakpando ya mgbe ọ dị mma na mmemme niile.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Ihe na-emeghị ka eziokwu
Dị ka Alex si kwuo ExpressSports, .. “Mama m na-agba mbọ mgbe niile ịkwagide m ka m mee ihe nkiri n'ụlọ akwụkwọ and Aghotaghi m ihe kpatara rue ugbua, ikwu eziokwu.
Achọghị m ịbụ onye ọ bụla n'ọgbọ ahụ, mana m na-eme nke ọma na ya yabụ ndị nkuzi m nọ na-amanye m n'ọnọdụ ahụ.
N'ihi nke a, anọgidere m na-eme ihe nkiri ruo mgbe m dị ihe dịka 14 mana enwebeghị m ike itinye aka na nnukwu egwuregwu ọ bụla ma na-eme ọtụtụ ihe iji mee ka ntorobịa ntorobịa m na-aga.
M nwụrụ site na ihe nkiri n'ikpeazụ mgbe ọ fọrọ nke nta ka Southampton tọhapụ m, klọb ndị ntorobịa m ”
NNE: Gị, ntakịrị ihe a maara banyere ya. Christian Oxlade-Chamberlain bụ nwanne ya nwoke nke tọrọ. A mụrụ ya n'afọ 1998 na Portsmouth, United Kingdom.
Christian bụ onye Etiti nke sonyeere Portsmouth FC na 2015. brothersmụnna nwoke anaghị ele otu.
Nwanna Alex Oxlade Chamberlain- Christain.
Onye Kristian, ị ka na-eto eto ka na-anọghị n'adịghị ka nwanne ya nwoke.
OBI: Neville Chamberlain mụrụ 22 Jenụwarị 1960 bụ nwanne nna Alex. Ọ bụ okenye (2 afọ okenye) nwanne nwanne Chamberlain (Mark).
Nna ha (nna nna Alex Chamberlain) mgbe ha si na Jamaica kwaga na ya lụrụ nwanyị ọcha. Neville nwere mkpụrụ ndụ nke nne ya.
Nwanne nna Alex Oxlade Chamberlain, Neville.
Mgbe ọ lara ezumike nká dị ka onye ọkpụkpọ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya maka nwanne ya nwoke Mark. Neville Chamberlain arụkwara ọrụ dị ka onye nchịkwa njikwa na Alsager Town na onye njikwa nke Hanley Town.
Ndụ Ndụ - Alex Oxlade Chamberlain Nwanyị, Nwunye, Nwa?
Na mbu, enweghi uzo obula nke nmekorita ya. Otú ọ dị, e nweela nkọ nkọ na asịrị banyere onye enyi ya nwanyị bụ.
Ọtụtụ aha ụmụ agbọghọ pụtara na enyo na ọ nwere ike ịbụ nwa agbọghọ ya dịka MarriedWiki kwuru. Otú ọ dị, nke a agbanweela n'oge na-adịbeghị anya n'otu akụkọ nzuzo nzuzo nke Alex Oxlade Chamberlain.
E gosipụtara na February 2017 na Oxlade-Chamberlain mere ọha na eze, mmekọrịta ya na ọbụ abụ Perrie Edwards nke nwa agbọghọ Ntakịrị ngwakọ.
Achọpụtala ụzọ abụọ ahụ na-achị ọchị ma na-egwu egwu ka ha na-eri nri nri ehihie na Mayfair, tupu ya etinye nọmba ya na ekwentị ya ma ha kewara ụzọ.
Mmekọrịta Perrie na Alex esiwo n'ike gaa ike ebe ọ bụ na ha biara n'ihu ọha na Instagram post na February, 2017. Ha abụọ na-eri nri kpakpando ise na iri nri dị mma.
Nwanyị Alex Oxlade Chamberlain (Paragon nke Mma).
Ha abụọ ga-ekwupụta alụmdi na nwunye ha n'oge na-adịghị anya dị ka akụkọ si dị. Ha agaghị akwụsịtụ iwe.
Alex Oxlade Chamberlain arsgbọ ala:
O yiri ka ọ dịghị otu egwuregwu nke Njikọ nke mbụ ga-ezu ezu ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala otu onye ọkpụkpọ na-eme njem na Range Rover.
N'ọgbọ ndị Liverpool ugbu a, nwa okorobịa na-eto eto bụ England na-awakpo onye ọgbọ egwuregwu bụ Alex Oxlade-Chamberlain bụ onye ọkpụkpọ egwu nke a na-ahụkarị mgbe ọ na-aga ịzụ ọzụzụ n'otu n'ime ndị SUV.
Alex Oxlade Chamberlain Mentor:
Dị ka Alex si kwuo…“Ọ B IFR you na ị na-achọ onye ga-enye gị ndụmọdụ, onye ga-enye gị ndụmọdụ n’egwuregwu bọọlụ; onye ka mma ịtụgharị karịa Thierry Henry? "
O yiri ka ọ bụ echiche nke Alex Oxlade-Chamberlain.
Kwupụta na TeamTalk, Oxlade-Chamberlain kwukwara, sị: "M nwere ike inwe okwu ole na ole na Thierry tupu m gawa Liverpool. M ka na-eche na ọ dịghị nwoke ka mma inye m ndụmọdụ banyere otu m ga-esi bụrụ onye kachasị mma ọbụlagodi na m bi na klọb nke na-ele ya anya dị ka akụkọ mgbe ochie
Alex Oxlade Chamberlain Biography - Jụrụ Mgbakwunye Nnukwu Ego:
Enyere ya onyinye ọhụrụ 180,000-a-izu iji gbatị oge ọ nọrọ na Emirates mana ọ họọrọ kama isonyere Jurgen Klopp Liverpool.
Akụkọ na-egosi na Oxlade-Chamberlain ekwenyela na £ 120,000-a-izu na ndị Reds mgbe ọ gwọchara ọgwụ na St George's Park na 30th nke August, 2017.
Alex Oxlade Chamberlain Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Alex malitere ọrụ football ya na Southampton Academy mgbe ọ dị afọ asaa. Ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Southampton na 2010 wee mee ya mbụ maka ọgbakọ ahụ mgbe ọ dị afọ iri na isii.
N'oge ụfọdụ, ihe agaraghị ya nke ọma, Na oge abụọ, ọ bịaruru nso ka ụlọ akwụkwọ Southampton wepụtara ya. O mechara gbanwee ụdị ya.
N'afọ 16 na 111 ụbọchị ochie, Oxlade-Chamberlain ghọrọ onye ọkpụkpọ nke abụọ nke kasị nta nke Southampton mgbe ọ si na bench na 5-0 League One merie Huddersfield Town na March 2010.
Alex mechara bụrụ onye na-eto eto nke abụọ na-eto eto na-eme egwuregwu Premier maka 'Ndị Senti' (mgbe Theo Walcott).
Ọ bụ onye a ma ama na-ede nọmba 10 maka ndị nsọ.
Na August 2011 ọ bịara mara na Oxlade-Chamberlain natara aka na Arsenal. E nwere asịrị na 'The Gunners' akwụ ụgwọ banyere £ 12 nde.
Alex Oxlade-Chamberlain ghọrọ onye England nke ọdụdụ ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ nke Njikọ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikere na akụkụ mbụ nke oge egwuregwu, dị ka Walcott na Arshavin emere maka otu.
Otú ọ dị, mgbe Gervinho gara Africa Cup of Nations, ndị ịgba ọsọ ụkwụ nwere ohere ịbịa na pitch ọtụtụ mgbe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Jarrod Bowen Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mathew Ryan nwa akwukwo n'akwukwo nke oma